Cawaaqibta heysashada jinsiyadaha kala duwan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cawaaqibta heysashada jinsiyadaha kala duwan
La daabacay tisdag 27 november 2012 kl 14.08
Xaaladda hadal-heynta dadka ku diiwaan-gashan iney yihiin muwaadiniin laba dal, ayaa dooddeedii ugu dambeeysay ay timid kolkii uu xisbiga Sverigedemoqoraadigu (SD) xilligii dayrtii ina dhaaftay uu hor-dhigay xubnaha baarlamanka mooshin la xiriira in laga mamnuuco xubin-nimada baarlamanka cid walba ee haysata laba dhalasho. Halka uu xisbigu sidoo kale u gudbiyay laanta baarlamanka ee qaabilsan howlaha baaritaanka inay u soo ogaato tirada iyo magacyada xil-dhibaannada haysta labada dhalsho, hase-yeeshee middaasi laga hor-yimid maadaama ay jebineeyso xeerka la xiriira xogta shakhsiga.
Haddaba suxufi ka howl-gala idaacadda caalamiga ee raadiyaha Iswiidhen ayaa u haan-xirtay siduu wax uga soo ogaan lahaa haddii ay caqabad ku noqon kari lahayd sidii hoowlaha qaarkood lagu heli lahaa. Göran Sundström, waa caalin ka howl-gala jaamicadda Istockholm:
- Haddii shakhsigu haysto laba dhalasho wuxuu xitaa noqon karaa madaxa ugu sarreeya ee dawladda. Inta aan la socdo ma jiraan xeer middaa xadidaya. Waxa keliya ee loo baahan yahay waa inuu shakhsigu haysto dhalashada dalka.
Sannadkii 2001 ayay ahayd kolkii wax lagu kordhiyey xeerkii dhalashada ee dalkan oo ay suurtagal noqotay in ruuxu haysan karo laba dhalasho oo kala duwan. Waa middaa suurtagalka ka dhigtay in badankood dadyoowga qaatay dhalashada dalkan Iswiidhen ay badankood halkoodii ka haystaan dhalashadoodii hore, haddii ey dooneyaan. Sannadkii ina dhaafay ayey qaateen dhalashada dalkan Iswiidhen dadyoow tiradoodu gaarsiisan tahay 36 000, kuwaasina oo qaar badan oo ka mid ah ay markiiba yeelaneyaan laba jinsiyadood oo kal duwan, xitaa iyaga oo aan war ka hayn.
Hanif Bali, waa xil-dhibaan baarlamanka u matala xisbiga Mudaraatka, weliba waxaa uu leeyahay dhalashooyinka Iswiidhen iyo Iiraan. Dhanka kale wuxuu xil-dhibaanku aaminsan yahay in fikirka xisbiga SD aanu ahayn mid laga soo fekerey:
- Waa fikir xaqiiqdii laga yaqyaqsoodo. Waa fikir aan laga baaraan-degin. Wuxuu sidoo kale ka hor-istaagi lahaa dadyoow badan sidii ey ku qaban lahaayeen jagada xil-dhibaan-nimada. Tusaale ahaan iiraaniyiinta dalkan ku dhaqan awood uma laha iney dib isaga celiyaan dhalashada dalkaasi, haddii ey doonaan. Xitaa dhashooda iyo kuwa ey sii dhalaan ayaan iska celin karin.
Wey noo caddaatay in la noqon karo madaxa dawladda iyo xil-dhibaan adiga oo haysta dhalashada laba waddan. Waa sidee haddaba howlaha kale? Aan ka bilowno hayaddaha ugu adadag ee ciidammada iyo hayadda nabad-sugidda ee Säpo.
Eva Kramér Jensfelt, waa madaxa laanta howl-wadeennada hayadda Säpo:
- Ma jiraan wax ku jaban inaad haysato laba dhalasho si aad hayadda uga howl-gasho. Waa ok.
Göran Olsson, waa madaxa laanta shuruucda ee ciidammada qalabka sida:
- Waxaa jira xeer oranaya in ruuxu uu haysto dhalashada iswiidhishka. Haddii uu middaa buuxiyana waa mid looga soo baxay shuruuddii loo baahnaa. Illaa iyo hadda wuxuu xeerka dalku aqoonsan yahay in shakhsigu lahaan karo laba dhalsho.